AdBlocker Best Bilaashka ah ee Firefox, Chrome, Edge iyo Windows
Waxaan hadda isticmaalay adblockers badan sanadihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan i.e ugu caansan. Adblock, Adblock Plus iyo uBlock Asal. Waxaan ogaaday isagoo adblocker ah rakibay waqti ka badan oo aan lahayn mid ka mid ah. Sababta si loo soo dajiyo adblocker waa si loo joojiyo xayaysiinta goobta iyo xayeysiis video. Qaybta xun waa marka websites ma samayn…
Chrome Firefox Freebies How To Talineyno Windows No comments Item Jaishi
Chrome How To Windows No comments Item Jaishi
Cusboonaysii Adobe Flash Player in Google Chrome Joogu
Waxaad u cusbooneysiin karaa Adobe Flash Player in Google Chrome la isticmaalayo talaabooyinka soo socda: Type chrome://components/ in the address bar in chrome Find Adobe Flash Player in the list Click ‘Check for update’ button hoos Adobe Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version…
Ku biir 63 macaamiishu kale